Dock pfungwa yeApple Watch ne USB HUB | Ndinobva mac
Panguva iyo iyo Mobile World Congress iri kuitirwa muBarcelona uye zvigadzirwa zvakaita seHuawei nhasi zvaratidza yavo Huawei Watch, Ine dhizaini dhizaini uye zviyero zvakakwana, munyika ye Apple Watch, wachi iyo isati yataurwa neApple, zvishandiso zvinoramba zvichioneka izvo, pamwe, isu tichaona pamusika munguva pfupi iri kutevera.
Mune ino kesi isu tinopa dock pfungwa yekugona kuwana iyo Apple Watch uye kuchaja iyo. Iyo dhizaini naOlver Sha uye inonzi Trio Simba. Iyo rutsigiro iyo ine matatu ekuchaja mapoinzi, imwe nekunyorwa kweiyo Apple Watch uye maviri USB madoko kune chero chinhu chatinoda kubatana
Nhasi zvese zvatiri kukuratidza hazvisi chinhu chinopfuura pfungwa uye ndizvo Hazvisati zvazivikanwa kana Apple ichizopa mwenje wakasvibira wevagadziri vakasiyana kuti vagadzire uye vatengese majaja nekunyorwa kwechisikwa chako chitsva.
Sezvauri kuona, iyo Trio simba ine nzvimbo nhatu dzakasiyana. Nzvimbo yekutanga yaizove induction yekuchaja nzvimbo. Kutevera, pazasi payo tinogona kuona LED paneli iyo yaizoita sechiedza chemubhedha uye pakupedzisira isu tine maviri emachiteshi eUS angatibvumidze kubhadharisa, semuenzaniso, yedu iPhone panguva imwecheteyo patinochaja wachi.
Iye zvino isu tinogona kungomirira nekuteerera Apple inofamba tokeni munaKurume 9 uye kuratidza kuti Apple Watch ichatengeswa sei, iyo charger ichave sei uye kana iyojaja iri yakapusa tambo senge iyo kesi yeiyo iPhone. Zvese izvi ruzivo Uchakwanisa kuvaziva mukutevera kweKeoteote kwatichaita mukati ini ndinobva kuMac.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Dock pfungwa yeApple Watch ine USB HUB